राजा महेन्द्रलाई मारेको आरोप म माथि लगाइयो - डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे - Tamang Online
राजा महेन्द्रलाई मारेको आरोप म माथि लगाइयो – डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे
डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे चर्चित डाक्टरमध्येका एक हुन् । मुटुरोग विशेषज्ञ डा. पाण्डे स्व. राजा महेन्द्रका निजी चिकित्सक थिए । राजा महेन्द्रकी आमा कान्ती राज्यलक्ष्मीदेवी शाहको उपचारमा संलग्न हुँदै गर्दा उनले पूरै राजपरिवारका सदस्यको उपचार गर्नुप¥यो । ०२८ सालमा राजा महेन्द्रको हृदयाघातका कारण मृत्यु भयो । त्यतिवेला राजपरिवारभित्रैबाट डा. पाण्डेलाई राजा महेन्द्रलाई मारेको आरोप लाग्यो । तर, उनले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई लागेको आरोपको कहिल्यै खण्डन गरेनन् ।
राजा महेन्द्रले राति १ बजे संसार छाडेर जानुभयो । उहाँको मृत्यु भएको खबर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छायो । मृत्युको विषय सबै मेरो थाप्लामा आइलाग्यो । डा. पाण्डेले उपचार गरेन, गलत औषधि खुवाएर मा¥यो समेत भने । एक प्रकारका गिरोहले मेरो बदनाम गर्ने प्रयास गरे । राजाको निधनले म पनि नराम्रोसँग शोकमा डुबेको थिएँ । तर, कुन शक्ति मेरोविरुद्धमा लाग्यो, म चकित परँे । त्यसलगत्तै नयाँ राजा वीरेन्द्रले मलाई बोलाएर बुवा हजुरको निधन खास के कारणले भएको हो ? भनेर सोध्नुभयो । मैले भएका सबै कुरा क्रमैसँग राखेँ । राजा वीरेन्द्र त बुझ्ने मान्छे हो । उहाँले मेरा सबै कुरा सुन्नुभयो । उहाँ बाबुको निधनको शोकमा हुनुहुन्थ्यो ।
राजा महेन्द्रले १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । भरतपुरमा बैठक धुमधामका साथ चलेको थियो । राजाले जबर्जस्ती पास गराउन खोज्नुभयो, तर अरूले त्यसलाई रोके । पहिलो प्रयास असफल भयो । उहाँ रिसाउँदै आजलाई छोडौँ अर्को हप्ता माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जसरी पनि पास गराउँछु भन्नुभएको थियो ।
« प्रवासमा रहेका नेपालीले भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ : कावा अध्यक्ष वस्ती (Previous News)
(Next News) तामाङ सेलो – बिर्स्यो कि क्या हो च्याङबाले ….(भिडियो) »